လွန်ခဲ့တဲ့ 2ပတ်လောက်က စင်္ကာပူမှာဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လွန်ခဲ့တဲ့ 2ပတ်လောက်က စင်္ကာပူမှာဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ…
လွန်ခဲ့တဲ့ 2ပတ်လောက်က စင်္ကာပူမှာဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ…
Posted by nyimalay on Jan 26, 2011 in Myanma News, News | 23 comments
ကောင်မလေးတစ်ယောက် (မ—-) စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းပီးလို့ အလုပ်ရှာနေတုန်းပါ..
ကောင်မလေးက သူ့ အမေနဲ့အတူနေပါတယ်….
တနေ့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို သူနဲ့အတူနေဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်…(ကောင်လေးကလဲ မြန်မာနိုင်ငံကပါပဲ..)
ဟိုမှာ တွေ့ ရင်းကြိုက်သွားကြတာပေါ့….
ကောင်လေးကအဲ့လိုနေဖို့ တောင်းဆိုတော့ ကောင်မလေးကလဲ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုပီးတော့ လက်ခံလိုက်ပါတယ်…
ပီးတော့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးနဲ့အတူ နေစဉ်ဖြစ်ရပက်များ အားလုံး(အစအဆုံးကို) video camera နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပီး
အင်တာနက်ပေါ်ကို upload လုပ်လိုက်ပါတယ်… ကောင်မလေးက ဒီကိစ္စကိုလဲ သိရော ကောငလေးကို တာဝန်ယူဖြေရှင်ေးပးဖို့ ပြောပါတယ်….
(ကိုယ်ဝန်ရှိသွားတယ်ဆိုရင်တောင် ဆရာဝန်တွေနဲံတိုင်ပင်ပီးတော့ ဖြေရှင်းလို့ရပါသေးတယ်.. ခုဟာက အင်တာနက်ဆိုတော့တော်တော့်ကိုမလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ.)
ကောင်လေးက ဘာမှမဖြေရှင်းပေးဘဲ ခေါင်းရှောင်သွားပါတယ်… တခြားနိုင်ငံကိုတောင် ထွက်ပြေးသွားပီလို့ သိထားပါတယ်..
ကောင်မလေးကတော့ နောက်ဆုံး ဘာမှမတတ်သာတော့ပဲ တိုက်ပေါ်ကနေ ခုန်ချပီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားပါတယ်…
ကောင်မလေးအမေမှာ အခု ဖြေရာမရဖြစ်နေသလို…ကောင်မလေးအဖေကိုလဲ ရင်မဆိုင်ရဲတာကြောင့် ရန်ကုန်ကိုလဲ မပြန်နိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ လူစိတ်မရှီတဲ့ (လူလို့ တောင်ပြောလို့ မရတဲ့ကောင်ပါ) (ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းကိုတောင် အညှာမတာ လုပ်ရက်တယ်…) ကောင်ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်…
ဒီကောင် မြန်မာပြည်ကိုတော့ ဒီတစ်သက်ပြန်လာလို့ မရတော့ပါဘူး..ပြန်ရောက်တာနဲ့ထောင်ထဲတန်းရောက်မှာပါ…..
ဒီလို လူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်ကြောင့် အမြတ်တနီုးတန်ဖိုးထားထားတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် မိဘရင်ခွင်ထဲကနေ ထွက်ပီး အဆုံးစီရင်သွားရရှာပါတယ်..
စင်္ကာပူရောက်မြန်မာ မိန်းခလေးများ ( ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက်..ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းမှာတောင် စိတ်မချရဘူး.)ဘယ်ရည်စားနဲ့မှ အတူမနေမိစေဖို့ ပါ…
အထူးသတိပြုကြပါ မမတို့ ရေ…..
Share By Twitter Facebook Forward Mail
(ခွေးကောင်) ကောင်လေးက အစကတည်းက အကြံအစည် ရှိပီးသားထင်တရ်။
ဘာပဲပြောပြော … တော်တော်ယုတ်မာတာပဲ …
ကောင်မလေးကလဲ …. (……) တရ်။ အင်းလေ … ကိုယ့်ဘဲဆိုတော့လဲ … အင်းပေါ့။
နောက်ထပ်ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေ မကြားပါရစေနဲ.တော့ ….. လို. ….
ကောင်မလေးကလဲ ဘာဖြစ်လို့ အရိုက်ခံတာတုန်း။
အခုလို ပေါ်လာလည်း ဘာဖြစ်လည်း လူတိုင်းနီးပါး ဒီကိစ္စရှိတာပဲ။
မိုးဟေကို တောင် ပိုပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်သွားသေးတယ်။
ဟို လေယာဉ်မယ်လည်း အေးဆေးပါပဲ။
သူ့ရည်းစားနဲ့ သူအိပ်တာ ဘာဖြစ်တုန်း။ ဟိုးကတည်းက လူတွေအားလုံး ရည်းစားနဲ့ အိပ်ကြတာပဲ။ မိန်းကလေးတွေ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် အရှက်မလွန်စေချင်ပါဘူး။ မရိုးသားသော ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။ ဟိုကောင်ကသာ မိုက်ရိုင်းတာလေ။
မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့အကောင် ။ သူ ဘယ်လောက်ပြေးနိုင်မလဲ ။မကောင်းမှုက သူ့နောက်ကနေ အရိပ်လိုလိုက်နေမှာ … ။
ဒါ မျိုး လူ ဓာတ်ပုံ ,နာမည်၊passpot No. တွေ နဲ့ တင် စမ်းပါ
တသက်လုံး လူတောမတိုး ဖြစ်အောင်လို့
ကောင်မလေးကိုသက်သက်အရှက်ခွဲတာ အစ်မတွေ၊ညီမတွေမရှိဘူးလားမသိဘူး အဲဒီကောင်တခြားနိုင်ငံထွက်ပြေးလဲမကြာပါဘူး ရဲဖမ်းခံရမှာပဲ ဘယ်လိုဆဲနည်းနဲ့ဆဲရမှန်းကိုမသိဘူး တော်တော်မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့သတ္တ၀ါပဲ
တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ.ကောင်ပဲ သူ.ညီမသာ အဲဒီလိုဖြစ်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ တစ်နေ. ၀ဋ်လည်မှာပါ
ကောင်လေးက ဘာတွေများ ရန်ညိုးရှိလို့ ဒီလို လုပ်တာလဲ မသိဘူးနော်။
ကိုယ်ချစ်ရင် ချစ်တဲ့ သူက တောင်းဆိုတာကို
သောက်သုံးမကျလို့ ။နှာခေါင်းမပါရင် မစင်တောင်
် စားနိုင်တာဘဲလို့ ဒီလိုမျိုး သုံးသပ်လို့ မရပါဘူး။
နွားမ ဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ိမိမိ ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ သူဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ချစ်သူအလိုကို
ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ မှ့ ငြင်းလေ့ငြင်းထမရှိပါဘူး။ဒါကိုငတုံးမ။လူညံ့လို့
သတ်မှတ်လို့ မရ ပါဘူး။
အမျိုးသမီးတွေ ဆိုတာ မိခင်မျိုးတွေ ဖြစ်ကြလို့
လူအချင်းချင်းမှာထားတဲ့ ကြင်နာစိတ်။မေတ္တာစိတ် တွေ သာမန်ထက်ပိုပါတယ်။
မိမိချစ်ခင်စုံမက်ရတဲ့သူဆိုတော့ ပိုပြီးပိုကြင်နာတာပေါ့။ဘယ်အမေ မဆို
(မိခင် ) တိုင်းမဆို
ဗိုက်နာတာမခံနိုင်လို့။ဗိုက်ကြီးတဲ့ဒဏ် မခံ နိုင်လို့ ဆိုပြီး
ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ တိုးတက်နေတာဟာ မိခင် တော်တော် များများက
မိခင်စိတ်တွေ ရှိကြလို့ ပါဘဲ။မိန်းမတွေ မိခင်စိတ် ရှိနေလို့သာ မောင်နှမ
မဟုတ်ရင် ဂျပန်က ယာကူဇာဂိုဏ်းက တောင်
ဆိုရင် လက်မခံဘူးလို့တော့ ကြားဘူးတာဘဲ
ဒီတော့ မိခင်မျိုးဖြစ်တဲ့ မိန်းမသားတွေ ကို မကြင်နာရင် နေကြပါ။
အထူးသဖြင့်ဒီလို ကိုယ့်ချစ်သူ။ကိုယ့်ရီးစား ကို အသေရေ ပျက် ။အရှက်ရ အောင်
ညစ်ညမ်းပုံတွေ ကို တင်ကြတာ တို့ မြန်မာပြည်သားအမျိုးကောင်းသားတွေ
တစ်ခြားနိုင်ငံက သူတွေ ။သူတို့ တွေ ရဲ့ အတွင်းရေးအချစ်နလန်ထတာတွေကို
မြန်မာပြည်မှာလဲ ဘာသာခြားတွေ ဘာသာရေးအလွန်တင်းကြပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့
(ဥပမာ-မူစလင် ) တွေမှာလဲ ဒါမျိုး ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က အချစ်ဇတ်လမ်းတွေ
။ အများကြီး ရှိကောင်းရှိမှာပါ။
မူစလင်မတွေ ပုံတော်တော် နဲမယ်ထင်တာဘဲ။
ဒါကိုသုံးသပ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တို့ မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ ဘာသာ ၀င်တွေ ဟာ
မိမိ အမျိုးကို မိမိ စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းတာကို တွေ့  ရတာဘဲ။
အပေါ်မှာ ပြောတာနဲနဲ တော့မှန်ပါတယ်။ ယောက်ကျား တယောက် အနေနဲ့ အဲလိုမျိုး လုံးဝမယုတ်မာသင့်ပါ။ မိန်းကလေး အနေနဲ့ ကလည်း ခုလိုနိုင်ငံ ရက်ခြားမှာ တွေ့တာမကြာသေးတဲ့ သူကို မလိုက်ရော သင့်ပါဘူး။ ( ကိုနဲ့သိ တာကြာ ၊အိမ်နဲ့လဲသိ၊ တခုခု ဆိုတာဝန် ယူမယ်လို့ ယုံကြည် ရတဲ့ သူဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့)
အဲဒီလူရဲ့ ဓါတ်ပုံကို အင်တာနက်ပေါ် တင်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ဒီလိုလူ မျိုးကိုလူတိုင်းသိထားသင့်တယ်။
နောက်ပြီး မကြေးမူံ ပြောပြချက်ကမှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စတွေဟာ အခုနောက်ပိုင်းမှာအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။
တချို့ စင်္ကာပူမှာ ရိုက်ထားတာဆိုပြီး မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ကျားလေး အပြန်အလှန် ရိုက်ထားတာတွေရှိပါတယ်။အဲဒီမိန်းကလေးတွေဟာ စင်္ကာပူကျောင်းသူတွေလို့ သိရပါတယ်။သူတို့တွေဟာ တကယ့်ကြေးစားတွေလို အတုခိုးပြီး၊သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။အဲဒီတော့ သူတို့ကိုယ်၌ ကပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်တာလားဆိုတာမသိပါဘူး။
ကျွန်တော် စင်္ကာပူမှာ (၁၂) လောက်နေဘူးပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ ကျောင်းသားဘ၀၊သင်္ဘောသားဘ၀ တွေနဲ့ နေခဲ့သည့် အချိန်များ ဤကဲ့သို့ သတင်းမျိုးမကြားခဲ့ဘူးပါ။ချစ်သူရည်းစား အတူနေခဲ့သူများ ဒုနဲ့ဒေးပါ။သို့သော်ထိုသို့သော် သတင်းမျိုးမကြားမမိခဲ့ပါ။။
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက ယ္ခုခေတ် လူငယ်များကြားမှာတော်တော်လေးရေပန်းစားလာတာလို့ထင်မိပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ မိမိတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားများကို ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်များပီပီ ထိမ်းသိန်းနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်း ကူညီစောင့်ရှောက်မူတွေ အများကြီးလိုနေပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး မိမိ ပါတ်ဝန်းကျင်၌ ရှိသော ညီငယ်၊ညီမ ငယ်လေးများကို လမ်းမှန်ကိုသိအောင်၊ နားလည်သဘော ပေါက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့ ဒီနေရာကနေ ဆော်ဩ လိုက်ပါတယ်။
တော်တော်မိုက်ရိုင်းတာပဲ။ နောက်ကို စင်ကာပူတို မလေးတို့ရဲ့ အခြေအနေလေးတွေ မြန်မာတွေ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ များများတင်ပေးစေလိုပါတယ်။ လူတွေတော်တော်များများက မကြုံဖူးရင် မကြောက်မလန့်ကြတာ များနေလို့ပါ။
တနေ့ သော အခါ မောင်ဟ၀ှာ
ကြားမိနောက်တွင် စိတ်ဘ၀င် လွန်စွာမရွှင်ပြ။
လူကိုလူက ယုတ်ပတ်ကြ ဆိုးစွ လူလောက။
မင်းမှာ နှမ ရှိရင်ဟ ကိုယ်ချင်းစာ ကြည့်ကြ။
သူသူကိုကို အော်ကြည့်မှ ငါလည်း လူရည်လှ။
အော်ပြီးနောက်တွင် အိမ်ပြန်ချင် နွမ်းလျ ဒီနေ့ ည။
အိမ်ပြန်သည့်လမ်း ထို စိတ်ဆန်း ဘာကို ၀ယ်ချင်ပ။
မောင်ဟ၀ှာက ခပ်ရှက်ရှက် လက်တို့ မေးချင်လျက်။
မထူးတော့ပါ ငါ့လူရာ မေးပြီးသကာလ…။
“ဟိုဟာလေ…အကို…စကာင်္ပူက ကောင်မလေးရဲ့ ……အခွေ ကြည်လားမသိဘူးနော်….”
အဲဒါမှ မှတ်ကြပါဗျ လူတို့သဘာဝ။
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါလား….. ဒီသတင်းတွေ တော်တော်များများဖြစ်နေကြပါလား……. ဒီပို့မဖတ်ခင် စက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာတင်ပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်က ကိုယ်ဝန်ရှိနေရဲ့နဲ့ မယူနိုင်ဘူး တာဝန်မယူဘူး တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူး အပျော်ကြံတာပါဆိုတဲ့ သတင်းလေးတောင် ကြားခဲ့ရသေးတယ်…. အခု ဝင်ဖတ်လိုက်တော့လဲ ဒီလိုပါပဲလေ.. အင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်….. မြန်မာလူမျိုးတွေက အားနာတတ်တာလဲ ပါတာပေါ့… အားနာတာကတော့ အားနာပါ ဒါပေမယ့် ခါးတော့မပါစေနဲ့ဆိုသလိုပါပဲလား……….. အတုခိုးမှားတာတွေလဲ ပါတာပေါ့လေ…….. ကောင်းတာလေးတွေကိုကျတော့ အတုခိုးတဲ့သူနည်းတယ်… မကောင်းတာကိုကျတော့ အတုခိုးတာများ………. အဲဒီလို အတုခိုးမှားတာတွေကြောင့်လဲ ဒီလိုသတင်းစိုးမျိုးတွေ များများ ဖြစ်လာနိုင်တာပဲလေ…. အင်း.. ဆက်ပြောရရင်လဲ မကောင်းပါဘူးလေ……..
ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေးတော့ အောက်တန်းကျပါတယ်….. ကိုယ့်နှမတွေ များအဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတွေ ထားတတ်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ မသိဘူးနော်………
စင်္ကာပူလို ..တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာ .. ဒါမျိုးအမှုက .. ဖြေရှင်းလို့သိပ်မခက်ပါဘူး..။
ချစ်သူချင်းဖြစ်စဉ်မှာ .. ဗီဒီယိုရိုက်တာကလည်း အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး..။
ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ..လိင်ဆက်ဆံကြလို့သာ ..ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ ..လူသားတွေ တိုးပွားဖြစ်ထွန်းလာတာမဟုတ်ပါလား..။ ကမ္ဘာလူ..သန်း ၆၀၀၀မှာ .. လေဥက အလိုအလျှောက်တယောက်မှ မပေါက်လာဖူးဆိုတာ .. တွေ့သိနိုင်မှာပါ..။
လိင်ကိစ္စဟာ ..ပြစ်မှုမဟုတ်သလို .. သေရလောက်အောင် ရှက်စရာကိစ္စကြီးလည်းမဟုတ်ရပါဘူး.။
လူငယ်တွေ.. ငယ်တုံး… ပျော်နိုင်တုံးပျော်..။ အဆင်အပြေတော့ ..သဘောမတိုက်ဆိုင်ရင် .. ကွဲကြရုံပါပဲ..။
အဲဒါကို ..တဖက်သားက .. အင်တာနက်ပေါ်တင်ရင်.. တရားစွဲပြီး နစ်နာလျှော်ကြေးတောင်းယုံပါပဲ..။
စင်္ကာပူဥပဒေမျိုးဆို ..အဲဒီလိုကိစ္စမှာ .. သိန်းချီလျှော်ရမှာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်..။ အဲဒီလူလည်း ထောင်နှစ်ရှည်ကျမှာပါပဲ..။
အဲဒါကို .. ဘယ်ကဘယ်လို .. တွေးမိပြီး .. သေကြောင်းကြံလိုက်သလဲမသိပါ..။
တော.သိရင်ဘယ်အရိုက်ခံမလဲ။သူသိလျှက်နဲ.အရိုက်ခံတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အခုလိုသေကြောင်းကြံမလဲ။ဒါရိုက်ရငအင်တာနက်ပေါ်တစ်နေ.ရောက်မယ်ဆိုတာကောင်မလေးလဲနားလည်မှာပါ။အခုတော.လူစိတ်မရှိတဲ.သူကြောင်.အသက်ပါဆုံးရှုံးသွားရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအခုလို Living Together
မိုက်ရီုင်းတဲ့ကောင်ကို ဘာမှမလုပ်ဘဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေလိုက်ရင် ပိုဆိုးမှာ မှတ်လောက်အောင် အပြစ်ပေးရမယ် ဒါမှ နောက်လူ(အကြံတူ)တွေ နောင်မလုပ်တော့မှာပါ
ဟိုကောင်ကိုတော့ ဘာမှ လိုက်မလုပ်ပဲ သတ်သေသွားတဲ့ ကောင်မလေးကို စိတ်တိုတယ် ။ အဲ့ဒီကောင်ကို အသေလိုက်ရှာပြီး လိုက်ကျွေးရမှာ … ဘယ်နဲ့ မဆီမဆိုင် သတ်သေရတာတုန်း ။ မိအေး နှစ်ခါနာဖြစ်နေပြီ ။
အဲဒီကောင်ကတော်တော်မိုက်ရိုင်းတာပဲနော် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိဘူး ကောင်မလေးမိဘတွေတော့ဘယ်လောက်တောင်ဝမ်းနည်းလိုက်မလဲနော်ွဒီအသက်အရွယ်ကျွေးမွေးပြုစုလာပြီးမှ ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်ကြောင့်များ ကို့ကိုယ်ကို အသေခံရတယ်လို့ အီးတုံ ပြောသလို ကိုကျွေးပြစ်ရမှာ
He may be dead withinacouple of years from his mistake.
တနှစ်လောက် နီးပါးကြာတဲ့ပို့ကြီး ပြန်မန်းနေကြပြန်ပြီ …
အဲ့အမှုကို ဂျိမ်းစဘွန်း လိုက်နေတယ်..